Portrait/ Pamella, mpiandraikitra ny serasera amin’ny lafiny rehetra | Grandir à Antsirabe
PORTRAIT : Tamin’ny Desambra 2018 izy no nanomboka niasa tato amin’ny Grandir à Antsirabe. Izy no misahana ny serasera sy ny fifandraisana amin’ireo mpiara-miasa sy mpamatsy vola ny fikambanana. Misandrahaka amin’ny sehatra maro ny asany : fikarakarana hetsika samihafa, fampivoharana ny fiaraha-miasa amin’ireo mpiara – miasa, fametrahana paikadin-tserasera ho fampandrosoana ny asan’ny fikambanana.
Salama Pamella ! Mba zarao aminay hoe ny lalana nodiavinao talohan’ny nahatongavanao tato amin’ny Grandir à Antsirabe ?
Vao avy nahavita ny fianarako tamin’ny eritaona aho tany Antananarivo. Tao amin’ny Ecole Supérieure d’Information et de Communication (SAMIS – ESIC) , nanaraka ny lalam-piofanana serasera ama-monina (Communication Sociale). Ity ny asako voalohany.
Arabaina izany ! Fa inona ary no nifidiananao ny fikambanana Grandir à Antsirabe ? Kisendrasendra ve sa tena nitady asa momba ny sosialy mihintsy?
Ie, araka ny maha serasera ama-monina ny lalam-pihofanana narahiko dia nitodika manokana tany amin’ireo ONG ny fikarohana asa nataoko. Fa ity asa ity tsy nampoiziko mihintsy : tsy nanampo mihintsy aho fa ahita asa toy ity eto Antsirabe . Tena kisendrasendra no nahitako ilay tolotr’asa. Rehefa nitsidika ny tranok’ala ny Grandir à Antsirabe aho dia tena vao maika tena nazoto tokoa nandefa ilay fangatahana.
4 volana ianao izay no niasa tato amin’ny fikambanana, ahoana ny fahitanao ny asanao, inona no tena hiandreketanao amin’izany ?
Mikirakira ireo fitaovan-tserasera rehetra : manentana ny ao amin’ny tranok’ala sy ny tamba-jotra sosialy ny fikambanana, manoratra lahatsoratra sy mandika izany amin’ny teny frantsay- malagasy, mamorona na manavao ireo fitaovan-tserasera ampiasina, manomana sy mikarakara ireo hetsika ataon’ny fikambanana ihany koa. Ankoatra izany dia manao ny fanentanana ho an’ireo mpitsidika avy amin’ny Grandir Aventure sy Grandes Latitudes koa aho.
Miandraikitra ihany koa ny serasera anatiny ato amin’ny fikambanana. Mila mahafantatra ny vaovao rehetra ato mba ahafahana mampita izany amin’ny ekipa sy ny mpamatsy vola na ireo mpiara-miasa any ivelany.
Ny fifandraisan’ny fikambanana amin’ireo sehatra hafa ihany koa dia izaho no miandraikitra azy. Zava-baovao amiko io. Raha oharina amin’ireo asako hafa ireo dia io no manahirana ahy indrindra. Kanefa i Grandir à Antsirabe dia mila mitady fihara-miasa manokana ho azy amin’izao : tena fanamby lehibe ho ahy izany. Fa mandeha tsikelikely sady manampy ahy amin’izany i Claire, Mathilde sy Tsitoha.
Betsaka izany asa izany!!! hoy ianao teo hoe mila mahay mifandray amin’ny rehatra amin’io asanao io. Aminao, inona ary ireo toetra tokony hanana amin’izany ?
Ngamba ny fitiavana mikarokaroka te ahafata-javatra. Mila anao mikarokaroka mba ahazoana ireo vaovao mahakasika ny tetikasa mandeha rehetra . Ary mila mahay miheno ihany koa tsy adino.
Nandritra izany volana vitsivitsy izay, inona ny fahatsiaravana nanamarika anao indrindra ?
Tamin’ny andro voalohany nahatongavako tato, nanatrika atrikasa fanentanana : mifanena amin’ireny ankizy eny amin’ny lalana ireny foana aho, kanefa tsy azoko an-tsaina na tsapako mihintsy ny zava-misy iainan’izy ireny. Nandona ny foko loatra ilay tantara fangalana ny toeran’ny ankizin’ny lalana iray sy ilay Slam nanaraka azy. Vao maika aho nientam-po hamampy an’ireo ankizy ireo : teo dia tena tsapako ny antom-pisiko ato.
Tanalahy : afaka manaraka izay fihovahovana rehetra mitranga. Kanefa izy rehefa mandeha dia misy fihetsika kely hataon’ny lohany ohatran’ny hoe mijery tsara aloha,aloha vao mandroso. Zaho anefa tena mifanohitra tanteraka amin’izany: tsy mandinika fa tonga dia mitsoraka. Fa efa mihezaka tsikelikely aho miala amin’izany toetra izany.
Toetra tsara/toetra ratsy ?
Tena mafy looha aho ! izany no mahatonga ahy mora tapa-kevitra rehefa misy zavatra tokony atoa. Sarotra amiko koa ny mandray baiko. Fa raha toetra tsara indray dia ny fandraisana andraikitra, hoy ny manodidina ahy.
Raha hira ?
Hira malagasy izay (hiran’ny tarika Levelo) : « Angola vaitra ». Tiako ny feony sy ny kilalaon-teny ao anatin’ny lohateny. Fiteny efa tsy dia fampiasa intsony io indrindra fa ny tanora : « angola », midika hoe hatsarana ary raha ampiarahina amin’ny hoe « vaitra » dia midika hoe « tena tsara tarehy loatra »
« La triologie du Seigneur des anneaux ». Tiako ny fomba nanatontosana azy, ilay izy toy ny angano. Ny herim-pon’i Frodon mitondra ilay peratra, ny finamanana … Tena tiako io sary mihetsika io, tena tsy haiko ho hazavaina fa ny hamehezako azy dia hoe « FENO »
Raha zavatra indray ary ?
Boky : tiako ny mamaky boky. Manampy ahy hiaina any anaty tontolo hafa mihintsy. Vao mamaky boky aho dia tonga dia miaina ao, sady mampianatra zavatra maro ihany koa.
« Connais-toi toi-même ». Amiko dia misy harena miafina any amin’ny tsirairay ka mila karakaraina izany. Indraindray dia tsy dia matoky tena aho, somary very izany, fa jereko izay zava-bitako taloha afaka mandroso ihany. Tena zava-dehibe ny fahafantarana ny tenanao ary ny fahatsapana ny maha izy anao ahafahanao mihatrika ireo sedra.
Ny « péché mignon » anao ?
Rehefa mijery film mitohy (serie), tsy mety tafajanona mihitsy ! Misy fotoana aho tsy matory fa mijery an’iny, dia tsy mijanona raha tsy tapitra tanteraka.
Raha « Héro » ?
Oh la la ! tena tsy hitako izay holazaina amin’izay.
Inona no tena zavatra nataonao nahafaly anao indrindra?
Efa tany amin’ny « collège » aho no tapa-kevitra fa hianatra ny Serasera. Nanao fifaninanana hiditra Oniversitem-pajakana aho fa tsy afaka. Nahita Oniversite tsy miankina aho avy eo, fa hoy ny ray ama-dreniko hoe lafo loatra ny sarany sady izaho mbola manana iray tampo maro.
Nefa tena tiako io Oniversite iray io ary, nanapa-kevitra ny hianatra teo ihany aho avy eo. Noho izany dia tsy maintsy niasa aho rehefa farany herinandro sy ny fialan-tsasatra hanampiana ny saram-pianarana. Nahazo naoty ambony ihany tamin’ny faran’ny fianaran nataoko : afaka miteny aho hoe « efa vehivavy lehibe ».
Ianao sady mafy loha nefa mandray andraikitra. Fa firy marina irai-tampoa aminao ?
Enina mianadahy izahay : 2 lahy ary 4 vavy, izaho ny vavy matoa fa zaza faharoa kosa. Ny zandriko farany indrindra dia vavy 14 taona, any ambanivohitra miaraka amin’ny ray ama-dreniko izy. Any tsy dia misy asa firy ka mifanampy izahay miaraka amin’ny zokiko lahy amin’ny saram-pianaran’ireo zandriko ireo. Mifampizara izahay : ny zokiko lahy miantoka ilay zandrinay lahy ary izaho ny zandrinay vavy.
hitako amin’izay ilay « super-hero » « super-grnade-soeur » (hehy)
Angamba! Tsy dia tsapako loatra fa misy fotoana ny zandriko miteny ahy hoe : « Raha manambady izany Pamella dia ahoana izahay » dia valiko fotsiny eo foana foana aho .
Lire aussi : Andiany faharoa amin’ny « forum des associations » karakarain’ny OSCAPE